Iimpawu ezi-9 zokuqala zePsyoriasis Arthritis [Iimpawu kunye neeMpawu zoNyango]
Iimpawu ezi-9 zokuqala zeSifo seNyango esiNganyangekiyo
24 / 03 / 2019 /0 Amazwana/i rheumatism/av ubuhlungu
Isifo samathambo sisifo esihlanganisiweyo esixekileyo.
Isifo samathambo esibuhlungu sinokubangela iintlungu kunye nokudumba kumalungu akho. Nazi iimpawu ezisithoba zokuqala ezikuvumela ukuba uqaphele ukuba isifo esixilongwa ngokuxilongwa kwinqanaba lokuqala.
I-Psoriasis sisifo sesikhumba esaziwayo esidala ukubangela i-silvery, ulusu olunamachaphaza emilebeni, isikali namadolo Malunga neepesenti ezingama-30 kwabo banesi sifo solusu bachatshazelwa sisifo samathambo. I-Psoriatic arthritis ikakhulu ichaphazela umqolo kunye neminwe- kwaye ikhokelela kwintlungu edibeneyo, ukuqina kunye nokudumba.
Silwela abo banezinye izifo ezinganyangekiyo kunye nezifo ukuba babe namathuba angcono onyango kunye noviwo - into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Yabelana ngenqaku, njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube (Cofa apha) Kwimithombo yeendaba zentlalo ukusijoyina kumlo wokuphila ubomi bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
Kule nqaku, sidlula kwiimpawu ezi-9 zokuqala zesifo samathambo esikuvumela ukuba uqaphele isifo xa useluseni -Kwaye ngaloo ndlela ufumana unyango olululo. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi.
Ngaba uyazibuza okuthile okanye ngaba ufuna okungakumbi kokugcwaliswa kwengcali? Silandele kwiphepha lethu le-Facebook «Vondt.net-Siyayikhulula intlungu yakho»Okanye Ijelo lethu le-YouTube (ivula kwikhonkco elitsha) yeengcebiso ezilungileyo zemihla ngemihla kunye nolwazi oluncedo ngempilo.
1. Ukuvuvukala kwamehlo
Siqala ngeempawu ezihlala zimangalisa abaninzi - Oko kukuthi ukudumba kwamehlo. Abantu abane-psoriatic arthritis baneziganeko eziphezulu zokuvuvukala emehlweni. Oku kunokubandakanya ukucaphukisa, iintlungu, amehlo abomvu, ukudumba kunye nobomvu kulusu ngamehlo.
Ukudumba okunjalo kwamehlo kubizwa ngokuba yi-uveitis. Ukuba unengxaki ye-psoriatic arthritis, unethuba eli-7-17% lokuphuhlisa olu hlobo lokudumba kwamehlo- ukudumba okunokukhokelela kwingxaki yombono kunye nomonakalo obonakalayo ngenxa yokungabikho konyango. Unyango ikakhulu lonyango lokuhambisa ikhusini kunye nokunciphisa ukuvuvukala.
Oku kugxininisa ukubaluleka kweli nqaku. Ukuxilongwa kwangoko kunokuqinisekisa ukuba amehlo akho ayagcinwa kwaye ukosuleleka akumoshisi umthambo wamehlo okanye omnye monakalo.
Funda ngakumbi: 5 Ukuzivocavoca umzimba kwabo baneFibromyalgia
Cofa apha ukufunda ngakumbi malunga nokuzivocavoca umzimba - okanye ubukele ividiyo engezantsi.
IVIDIYO: Ukuziqhelanisa neentshukumo ezi-5 kwabo baneSoft Tissue Rheumatism
Ukuthambisa kunye neengubo ezilawulwayo kunye nokwenza umthambo kunokukunceda ukunciphisa uxinzelelo lomzimba kunye nengqondo emzimbeni wakho. Kwividiyo engezantsi ungabona inkqubo yokuzivocavoca eneemvavanyo ezintlanu ezahlukeneyo ezinokukunceda ukunciphisa uxinzelelo.
Joyina usapho lwethu kwaye ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube (cofa apha) ukufumana iingcebiso zokuzikhulula simahla, iinkqubo zokuzivocavoca kunye nolwazi lwezempilo. Wamkelekile ukuba abe!
2. Ukudumba kunye nokuqengqeleka kwamanzi emzimbeni
Isibonakaliso esibonisa isifo samathambo kunye nezinye iintlobo zesifo esihlanganisiweyo se-rheumatic. Ukuvuvukala kwamalungu kuya kubangela ubomvu kwesikhumba, ukuphuhliswa kobushushu kunye nokudumba kwalapha ekhaya.
Ukuthambisa izicubu kuvelisa ubushushu ngenxa yomsebenzi owandayo wokuvuvukala. Umdibaniso otyumkileyo unokuziva ushushu xa uchukumisiwe. Ngaba ubusazi ukuba kukho amanyathelo endalo okulwa nokosuleleka ngokuchasene nosulelo olunjalo? Unokufunda ngakumbi malunga noku ngokusebenzisa ikhonkco elingezantsi.
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezinganyangekiyo nezifo ezichitha yonke imihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook og YouTube channel (Cofa apha) kwaye uthi, "Ewe kuphando olunzulu malunga nokuxilonga kubuhlungu beentlungu".
Ngale ndlela, umntu unokwenza ukuba iimpawu ezinxulumene noku kufunyaniswa kufumaneke ngakumbi kwaye aqinisekise ukuba abantu abaninzi bathathwa ngokungathí sina - kwaye ngenxa yoko bafumane uncedo abaludingayo. Siyathemba ukuba ukwanda kwengqwalaselo kungakhokelela kwinkxaso mali enkulu kuphando malunga novavanyo olutsha kunye neendlela zonyango.
Funda: Unyango olu-7 lweNdalo kunyango lweArmoriasis
Apha unokufunda ngakumbi malunga neendlela ezisixhenxe zonyango ezahlukeneyo ze-psoriasis samathambo.
3. Iintlungu ezisezantsi (uLumbago)
I-Psoriatic arthritis inxulunyaniswa ngokuthe ngqo nokwanda kweentlungu kumqolo osezantsi- okwaziwa ngokuba ngumqolo osezantsi. Oku akunakothusa uninzi lwethu- ngenxa yokuba isifo samathambo esikhokelela kwi-psoriatic arthritis sikhokelela ekubeni i-arthritis kunye nokugcinwa kwamanzi.
Ezi zinto zikhokelela kulwelo oluninzi ngaphakathi kwindibaniselwano ngokwalo-enokuthi ikhokelele ekunciphiseni ukuhamba kunye nentlungu edibeneyo. Ingakumbi ukudibana komqolo ongezantsi okuxhaphake kakhulu ekwandeni kweentlungu kwabo banesifo samathambo. Uninzi lunomphumo olungileyo wonyango yi-chiropractor yale mihla okanye iphysotherapist yezifo ezinjalo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uxele ukuba ayisiyiyo kuphela umva osezantsi oqheleke ngakumbi ukuba neentlungu kwabo bane-psoriatic arthritis- kunye nezinye iingxaki zamathambo. Olunye uxilongo oluhlala luchaphazela eli qela lesigulana luyabizwa stress entanyeni. Unokufunda ngakumbi malunga noku kwinqaku leRåholt Chiropractor Centre kunye nePsychotherapy kwinqaku elingezantsi.
Funda: - Oku kufuneka uyazi malunga noxinzelelo lokuthetha
Ikhonkco livula kwifestile entsha.
4. Izipikili eziwayo kunye neempawu zezipikili
Isifo se-Psoriasis samathambo sinokubangela ukuba izipikili ziphuke ngokupheleleyo okanye inxenye kwizikhonkwane. Igama lokunyanga le meko libizwa onycholysis. Ukwahlulwa okunje kwezikhonkwane kunokubakho ngenxa yomothuko-umzekelo, ngokubetha inzwane emaphethelweni okanye ukuba unyathelwe ngexesha lomdlalo webhola.
Oku kunokwenzeka kwizandla nakwiinyawo zombini. Ingxaki enobunzima echaphazela uninzi lwaba banesifo samathambo e-psoriasis kwaye inokukhokelela kubunzima bokubaleka okanye ukuhamba. Uninzi lusenokukufumanisa kubangela iintloni okanye ukuthintela umntu ekubeni abe ekuhlaleni. Izikhonkwane nazo zinokuchaphazeleka kukufakelwa kobuncinci (i-dents) kwisakhiwo sezipikili uqobo
Ngendlela, ubusazi ukuba ezinye iintlobo zokutya kunye nokutya kunokunceda ukulwa nokudumba kwiimisipha kunye namalungu? Ukutya 'kwe-fibromyalgia' kulandela izikhokelo zesizwe zokutya kunye nezikhokelo kwaye kunokuba nefuthe elihle kwabo baneengxaki ze-rheumatic. Unokufunda ngakumbi ngayo kwinqaku elingezantsi.
5. Iminwe kunye neenzwane ezidumbileyo
Ukudumba kweminwe kunye neenzwane kukwabizwa ngokuba dactylitis - kwaye lolunye lweempawu ezinamandla ze-psoriatic arthritis. Kubantu abaninzi, i-psoriatic arthritis kuqala iqala kumalungu amancinci ezandla okanye ezinyaweni. Le meko yaziwa njengesiqwengana seminwe xa isenzeka kwiminwe.
Abantu abaninzi banokumangaliswa kukuba ukudumba okunje kubalwa njengenye yeempawu eziqinisekileyo zesifo samathambo - kunye neengxoxo zokuba oku kwenzeka kwezinye iindlela zerheumatism. Ayilunganga. I-Psoriatic arthritis yimeko ebangela ukuba yonke iminwe okanye iinzwane zidumbe - hayi amajoyina ngokwawo.
Kwingcali ye-rheumatologist, kubaluleke kakhulu ukuba wazi ngamanye amanyathelo endalo okulwa nokudumba - ngaphandle kwamayeza. Via kwikhonkco elingezantsi ungafunda ngakumbi malunga namanyathelo asibhozo endalo anokukunceda ugcine usulelo, kubandakanya ne-enthesitis, i-synovitis kunye ne-tendinitis, kuhlolo.
Funda: -Imilinganiselo yendalo yokuvuvukala ngokuchasene neRheumatism
6. I-Psoriasis Arthritis kunye nobuhlungu beenyawo
Ukuqaqanjelwa sisifo samathambo kunokubangela ukwanda kweziganeko zenyawo nasezinyaweni. Kungenxa yokuba abo bane-psoriatic arthritis bahlala bechaphazeleka kwi-enthesitis-okt imeko apho ufumana khona iintlungu kuthungelwano lomsipha ngokwawo apho ithenda inamathela khona ethanjeni.
Ezinyaweni nasezinyaweni oku kunokuba yaziwa njengeentlungu, ukudumba kunye noxinzelelo emva kwesithende (Achilles tendon) okanye phantsi konyawo (plantar fascia). Phakathi kwezinye izinto, oku kunokubangela iintlungu xa usihla kusasa-ngokufana nefasciitis yesityalo kwaye kubuhlungu emva kokubaleka uhambo. Siyavuya ukucebisa ngokusetyenziswa kwe Iisokisi zokunyanzelwa kwe-fasciitis kuwe okhathazwa ziinyawo kunye nentlungu yesithende (ikhonkco livula kwifestile entsha).
Funda: Iindidi ezi-7 zeFibromyalgia Pain [Isikhokelo esikhulu kwiiNdawo zoBuhlungu ezahlukeneyo]
Cofa ekunene ucofe u "vula kwi window entsha" ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda eli nqaku emva koko.
7. I-Psoriasis Arthritis kunye ne-Elbow Pain
Ukuxhamla, iintlungu kunye nokuvuvukala kwamaqela e-tendon kusenokubetha ii-elbows. Oku kuya kubangela iintlungu zetoni ngokuhambelana nengqiniba yentenetya- ekwabizwa ngokuba yi-lateral epicondylitis. Iimpawu zeklasikhi zibandakanya ukubambeka kwintlungu, ukuhla kwamandla emandla kunye nentlungu ye-elbow ngexesha lokuhamba okanye umsebenzi wezandla.
Iingxaki zeTendon zinokubangela ukuba ibe noxinzelelo kakhulu xa uchukumisa iindawo ezichaphazelekayo. Ngamanye amagama, abo bane-psoriatic arthritis nabo banomngcipheko okhulayo wokuba neengxaki ze-tendon kunye ne-tendonitis.
Unyango loxinzelelo lonyango luhlobo lonyango lwangoku olunokuthi lubonelele ngesiqabu seempawu kunye nokuphuculwa kokusebenza. Olu hlobo lonyango lwenziwa ngesiqhelo ziingcali zononophelo lwempilo ezivunyiweyo- njenge-chiropractor okanye iphysotherapist.
Funda: Yintoni omele uyazi ngoXinzelelo loNyango loMbane
8. Ukukhathala kunye nokudinwa
Njengolunye unyango lokuxilonga, isifo samathambo sinokukhokelela kwimpendulo eqhubekayo, ye-autoimmune emzimbeni. Oku kuthetha ukuba amajoni omzimba aphantse ukuhlasela iiseli zomzimba. Ayothusi into yokuba oku kuyakufuna amandla amakhulu kubantu abachaphazelekayo- oko kunokubangela ukudinwa.
Ukukhathala kunye nokudinwa kuthetha nje ukuba uhlala uzive udiniwe kwaye unamandla. Uninzi lwabantu abanesifo samathambo esivelayo badiniwe kukuba badiniwe kakhulu ekupheleni kosuku kwaye bahlala ngokulala emva kwemini.
Funda: Yonke into odinga ukuyazi malunga ne-Psoriasis Arthritis
9. Ukuqina kunye nokudinwa
Njengoko kukhankanyiwe, i-psoriatic arthritis ibangela utshintsho ngaphakathi kwamalungu - ngohlobo lokudumba kunye nokuqokelelana kolwelo. Olu tshintsho lunokubangela ukuba amalungu adibane nokuqina ngokuhamba kwaye nokuba buhlungu okanye ngqo kubuhlungu kwizikhundla ezithile.
Ke, njengamanye ama rheumatics, abo bane-arhente ye-psoriatic arhente yonyuka yezehlo ezihlangeneyo. Uninzi lwabantu ngenxa yoko luxhomekeke ngakumbi ekugcineni ukusebenza kuhamba ngokudityaniswa kwonyango lomzimba kunye nokuzilolonga ekhaya. Uya kufumana iingcebiso zolu hlobo lokuzilolonga apha ijelo lethu le-YouTube (Cofa apha).
Funda: Bhalisa kwiChannel yethu ye-YouTube yeeNkqubo zokuVavanya Simahla
Kwisitishi uya kufumana inani leevidiyo zoqeqesho ezinokukunceda ufezekise ubomi bemihla ngemihla. Ikhonkco elingasentla livula kwifestile entsha.
Ngaba ufuna ulwazi olungakumbi? Joyina eli qela kwaye wabelane ngolwazi ngakumbi!
Silandele kwi-YouTube yoLwazi lweSimahla seMpilo kunye nokuzivocavoca
Zive ukhululekile ukubhalisa Kwitshaneli yethu (Cofa apha) - kwaye ulandele iphepha lethu kwi-FB kwiingcebiso zempilo yemihla ngemihla kunye neenkqubo zokuzilolonga.
Siyathemba ukuba eli nqaku linokukunceda ekulweni iintlungu ezingapheliyo. Ukuba le yinto oyithandayo, ke ngoko sinethemba lokuba ukhetha ukujoyina usapho lwethu kwimidiya yoluntu kunye nokwabelana ngenqaku ngakumbi.
Iingcebiso malunga nendlela onokuyinceda ngayo ukulwa nentlungu engapheliyo:
Ukhetho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB -Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela elifanelekileyo le-facebook olilungu lalo. Okanye cinezela iqhosha "SHARE" ngezantsi Ukwabelana ngeposi kwi-facebook yakho.
Chukumisa oku ukuba wabelane ngakumbi. Enkosi kakhulu kuye wonke umntu obenegalelo ekukhuthazeni ukuqonda okwenyusa i-rheumatism.
Ukhetho B: Nxibelelana ngokuthe ngqo nenqaku kwibhlog yakho okanye kwiwebhusayithi.
IPHEPHA ELANDELAYO: Unyango olu-7 lweNdalo kunyango lweArmoriasis
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/psoriasis-artritt.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-24 20:06:342021-03-24 10:58:38Iimpawu ezi-9 zokuqala zeSifo seNyango esiNganyangekiyo
Imithambo emi-6 yokuzilolonga ngokuchasene neNosteoarthritis yeNtloko I-Fibromyalgia kunye nokukhulelwa